MANAMAFY NY FANADIOVANA INY FARITRA 67HA INY POLISIN’NY CSP7 : VOASAMBOTRY ILAY LEHILAHY MODY MAMO MANENDAKA MPAMILY, NY NAMANY IRAY HAFA MODY MAMO MPANENDAKA MPANDEHA AN-TONGOTRA ARY NY MPANENDAKA IRAY MILANJA ANTSY LAVA LELA ENY AMIN’NY VATOBE » Police Nationale
« FIP TOAMASINA, NAHITAM-BOKANY NY FISAFOANA ANDRO SY ALINA TSY MIATO, NALAKY NY FIDINANA TENY AN-TOERANA NAMALY NY ANTSO VONJY KA TRA-TEHAKY NY POLISY TAMIN’NY 01 ORA SY SASANY MARAINA IREO JIOLAHY MPANAO FANAFIHANA
MANDRAY NY ANDRAIKINY NY POLISIM-PIRENENA AMIN’NY FANABEAZANA NY OLOM-PIRENENA ENY AN-DALAMBE »
Ny azo antoka dia manao ny ainy tsy ho zavatra ireo Polisy izay miasa eny anivon’ny Kaomisarian’ny boriboritany mampandry fahalemana ireo faritra izay iadidian’izy ireo.
Efa am-bolana maro no mitohy tsy an-kiato ny fisafoana andro sy alina izay atao ary ahitam-bokany hatrany izany. Raha ny etsy amin’ny Kaomisarian’ny 67Ha manokana dia nandray andraikitra ny Polisy eny an-toerana amin’ny fandiovana iny faritra iny.
Voasambotra, efa natolotra ny fitsaràna ary notanana am-ponja eny Antanimora ilay mpanendaka mpamily fiara izay mody mamo hita tamin’ny tambazotra serasera, lehilahy iray hafa izay mpanendaka mody mamo toa azy ihany koa no efa voasambotra teny amin’ny « Aigle noir » ary efa notanana am-ponja eny Antanimora taorian’ny nanonolorana azy teny amin’ny fitsaràna.
Ankoatr’izay dia lehilahy iray mpanendaka miaraka amin’ny antsy lava lela eny amin’ny vatobe 67Ha ihany koa izay anisan’ny mampitaraina ny olona amin’iny faritra iny koa no voasambotry ny Polisin’ny CSP7.
Mitohy hatrany ny ezaka fampandriana fahalemana izay ataon’ireo Kaomisarian’ny boriboritany rehetra ary manao tohy vakana sy hotaterina amitsika eto avokoa ny vokatra azo amin’izany.